प्रदेश ५ मा कोरोना निको हुनेको दर ७३ प्रतिशत |
गृह पृष्‍ठ कपिलबस्तु प्रदेश ५ मा कोरोना निको हुनेको दर ७३ प्रतिशत
प्रदेश ५ मा कोरोना निको हुनेको दर ७३ प्रतिशत
प्रकाशित मिति : २०७७ भाद्र ३१ , बुधबार १०:०८
भदौ ३० कपिलवस्तु
प्रदेश पाँचमा हाल सम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ८ हजार ५ सय ४४ पुगेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामा संक्रमित भएका मध्ये हाल २ हजार १ सय ७९ रहेको छन । ति मध्ये २४९ जनामा लक्ष्यण सहितको कारोना देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आज प्रदेश पाँचमा कुल ९७ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरु थपिएका छन् । जसमध्ये महिला २९ र पुरष ६८ जना रहेका छन् ।
प्रदेश पाँचमा कोरोनालाई जितेर घर फर्कनेको संख्या अहिले सम्म ६ हजार २ सय १८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १३१ जनाले कोरोनालाई जितेको आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सूचना अधिकारी डा. पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अहिले सम्म प्रदेश पाँचमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४९ पुगेको छ । यो सँगै कोरोनाका कारण भएको मृत्यु दर ०.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
रोग व्यवस्थापनका लागि संचालित आईसोलेसन अस्पतालहरु मध्ये लुम्बिनी प्रादेशशिक अस्पतालमा ३६ जनाको सामान्य, १५ जनाको आइसियु र १ जनालाई भेण्टिलेटरमा राखि उपचार भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै भिम अस्पताल भैरहवामा २४ जनाको सामान्य र ३ जनाको आईसियुमा उपचार भईरहेको छ । उता भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज बाँकेमा ५० जना सामान्य र४ जनाको आइसियुमा उपचार भईरहेको छ भने बेलझुण्डि कोरोना अस्पताल दाङमा ५२ जना संक्रमितहरुको सामान्य कक्षमा उपचार भईरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले लक्ष्यण बिहिन संक्रमितका लागि १०२ वटा आईसोलेसन केन्द्र बनाएको छ जसमा हाल १० हजार ६सय ५ जनालाई राखिएको जनाइएको छ ।
अहिले प्रदेश पाँचमा कोरोनाको ८ प्रतिशत पोजेटिब केस रहेको र निको हुनेको दर ७३ प्रतिशत रहेको पनि डा. पौडेलले बताउनुभयो ।
यता कपिलवस्तु जिल्लामा भने अहिले सम्म १ हजार २ सय ३९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । हाल जिल्लामा ३ सय ९३ जनाको पिसिआर रिर्पाेट आउन अझै बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका कोरोना फोकल पर्सन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । अहिले सम्म कपिलवस्तुमा कोरोनाका कारण ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पछील्लो पोस्ट करेन्ट लागेर दाङमा ३ बालबालिकाको ज्यान गयो
अगिल्लो पोस्ट कोरोनाको रुप बढ्दो, बुधबार १५३९ जना थपिए
मजदुर सुकुम्बासीहरु माथी सरकारले गरेको बर्बर दमन निन्दनीय छ – न्यौपाने